NY MPANOMPO TSARAN'I KRISTY
Ry havana malala rehetra ao amin'i Tompo, ny Alahady anio dia Alahady natokana ho an'ny Vondronasa Fampianarana Protestanta, ary koa hibanjinana ny lohahevitra manao hoe: "Mifaly amin'ny famonjena ny mino." Ny Tenin'Andriamanitra izay entina hangalàna ny vatsim-panahy ho antsika dia mifanaraka indrindra amin'izany satria izay ambara eto amin'ity I Timoty 6:17-19 ity dia "Anatra sy teny farany ho an'i Timoty, mba handositra ny zavatra rehetra izay mahatonga fitaka mampihataka amin'Andriamanitra no hita eo. Eo ihany koa ny famporisihina azy hitandro ny maha vavolombelon'Andriamanitra, ka hiezaka hitady fahamarinana sy toe-panahy araka an'Andriamanitra, ombam-pinoana velona." Ary tokony ho izany ihany koa no fiainantsika mpanara-dia an'Andriamanitra ankehitriny. Toa inona moa izany?
I TSY MITOKY AMIN'NY HARENA! (And.17)
Asa sarotra sy makadiry no apetrak'i Paoly ho an'i Timoty eto, dia ny fitaizam-panahy atao amin'ny mpanan-karena. Asehon'i Paoly mazava tsara fa adidy tsy maintsy ataony izany; satria eo anatrehan'Andriamanitra dia tsy misy fizahan-tavan'olona. Noho izany dia hoy izy: "anaro ny mpanan-karena amin'izao fiainana izao..." Ny harena ara-nofo mihitsy no tondroina eto, ary ny tena manamarina izany, dia ny teny hoe: "amin'izao fiainana izao...". Ary izay kendren'i Paoly eo amin'ny fananarana azy, dia noho ny harena mety manova ny fiainan'ny olona; ka indraindray na dia olona tso-piainana izao aza, olona mahafinaritra alohan'ny nahazoany harena; rehefa tonga mpanan-karena dia manjary mirehareha tampoka ka tonga miavonavona. Ny zava-doza ateraky ny fiavonavonana noho ny harena dia fireharehana ka izany no itokiany noho Andriamanitra. Ary izany indrindra no antony nitenenan'i Paoly amin'ny tohiny hoe "matoky ny harena miovaova." Ampahafantarin'ny Tenin'Andriamanitra aminao ary fa tsy mety ny mitoky amin'ny harena. Andriamanitra, izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifaliantsika no tokony hianteherana, fa Izy no iavian'izao zavatra rehetra izao, ary Izy no mihazona azy, sady Izy koa no antony ( Rom 11:36).
II MAHASOA NY HAFA! (And.18)
Hoy ny teny eto: "Mba hanao soa..." Ny fanaovan-tsoa dia mikendry lafin-javatra maro, nefa ny lehibe indrindra amin'izany dia ny "tena" sy ny "namana". Misy tokoa mpanan-karena izay tsy afaka hampiasa ny harena hanasoa ny tenany noho ny harena izay manjary andriamanitra kely tompoiny. Ka ny tokony ho tsaroan'ny kristianina, ary izany no asain'i Paoly hananaran'i Timoty azy ireo, dia ny hahalala hanasoa ny tenany amin'ny lafim-piainana rehetra ho voninahitr'Andriamanitra, ary koa hahalala hiantra ny namana ka hamonjy am-pitiavana ny ory sy ny sahirana. Miseho mazava tokoa ny fahamarinan'izany amin'ny teny manaraka hoe :" mazoto miantra." Ny teny manaraka mahakasika ny harena aza, dia mitarika ny saina hahatsiaro ny Tenin'ny Tompo tamin'ny mpianany hoe: "miharia harena any an-danitra..." (Mat.6:19-20), satria hoy izy: "mba hana-karena amin'ny asa tsara.". Tsy ho tanteraka anefa izany zava-tsoa izany, raha manjaka ao am-pon'ny olona ny fiavonavonana sy ny fanadrantana ny harena ho ambony noho Andriamanitra.
III MANANA FANORENANA TSARA AMIN'NY FIAINANA HO AVY! (And19)
Hoy ny and.19: "ka dia hihary fanorenana tsara ho an'ny tenany ho amin'ny andro ho avy mba hihazonany ny tena fiainana...". Ny asa tsara atao ho fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra irery ihany no fihariana ny fanorenana tsara ho an'ny tena amin'ny andro ho avy hihazonana ny tena fiainana. Tsy misy olona hanatanteraka izany, raha tsy olona efa "velon'ny finoana" tokoa izy, ka mahatsiaro amin'izany fa tsy velona ho an'ny tenany intsony izy; fa velona ho an'i Kristy ( Gal. 2:20), hanatanteraka ny "asa soa" amim-pitiavana sy amiim-panentren-tena, ho fanehoana ny sitrapon'Andriamanitra sy ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Ary izany "asa tsara" izany, dia asa tsara tsy mitaky valiny velively amin'ny olona izay hanatanterahana azy. Fa ny olona toy izany no azo lazaina fa manana fanorenana tsara tokoa ho amin'ny fiainana ho avy,s atria tsy voafatotry ny fiainana ankehitriny.!
Indreo indray ary ry havana, no toetran'ny mpanompo tsaran'i Kristy, mifaly amin'ny famonjeny: tsy mitoky amin'ny harena, manasoa ny hafa, manana fanorenana tsara amin'ny fiainana ho avy. Dia mandehana ary ianao ka manaova toy izany koa! Ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany! Amen.